Jinyun Jewelry rakaumbwa muna 2006. boka redu riri muna Guangzhou, China. Tiri nyanzvi Stainless Steel Jewelry Wholesale kubudikidza B2B uye vave nemakore anopfuura 10 bhizimisi mutsetse uyu. Saka kure, tave pamwe vanopfuura 300 bhizimisi kubvira ipapo uye kuti chinonyanya yakakunakira muripo nzira, yakanakisisa mitengo uye mabasa kuti vatengi dzedu.
Kune zvinopfuura 100,000 mazano akasiyana-siyana munogona kuwana kubva Website yedu, www.julongsteeljewelry.com . Vose mhando itsva achapiwa yoku- ne pavhiki pamusoro kupfuura 2000pcs zvigadzirwa zvitsva. Products mapurani siyana zviri zvikuru kwazvo uye chinogona kuzvigutsa zhinji vatengi zvakasiyana kunyika dzakasiyana 'zvinodiwa.
Tine zvinopfuura 10,000 vakanyoresa nhengo vari kubva munyika yose, vangadai kazhinji kuti nguva kuti kuzodzosera Muchengete kwaizovaunzira vazhinji yakakunakira kubva vatengi edu chete tinoda anenge 3-15 mazuva kugamuchira zvinhu zvavo. We zvinopa yakaderera chaizvo mutengo zvinhu uye nokukurumidza uye nyore muripo nzira, akadai Pay-pal, Bank kuchinjwa, pamwe Western uye Mari giremu.
Kana uchifarira, ndapota usazeza kutaura nesu.